Merie ọtụtụ nde mmadụ. Play ke Internet - BuyLotteryTicket.info
Lotto - lotiri , n'ihi ya, ị nwere ike bụrụ onye na- onye nwere nde ego ! E nwere n'ụwa ụfọdụ nnukwu lotiri , nke ị nwere ike nweta nnukwu nchikota . Ke United States , lotteries bụ ewu Ike Na na Mega Ọtụtụ nde mmadụ , mgbe Europe ndekọ - eti SuperEnalotto na EuroMillions . A lotteries ike ugbu a akpọ nile internet .
Ike Na bụ American lotiri , n'ihi ya, i nwere ike ịbụ onye nwere nde ego ! Ọ na- esi nke International Association nke lotiri ( MUSL ). Ike Na lotiri iwu dị nnọọ mfe. Ị kụrụ nile nọmba mmasị . Ọ bụrụ na ị kụrụ niile ọnụ ọgụgụ enweta isi jackpots Jackpot . Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ ga na- niile na ọnụ ọgụgụ , isi chọr'inwe bụ òkè niile ndị mmadụ. $ 20 nde - ukwuu opekempe ego ( jackpot ) i nwere ike imeri Ike udo. Onye ọ bụla rollover , ọ bụrụ na ọ dịghị na-emeri , mụbara site na $ 5.000.000 United States . Na-emeri na ugwo na obere ihe a oge nke afọ 29 . Usoro egwuregwu ke Ike Na : Họrọ 5 nọmba 1 69 tinyere otu nọmba site 1 ruo 26 Nke a na ndị ọzọ na nọmba Ike udo. Ọnụ Ọgụgụ 1 69 ka ndị na-acha ọcha na ngalaba , ka nọmba 1 ruo 26 na uhie crutches . Ike Na lotiri nọ Wednesday Saturdays . Ebe na-adọta Ike Na bụ MUSL ke West Des Moines, Iowa. Ike Na lotiri Time: 22:59 US Eastern oge, mgbe ke Central United States ke 21:59 . Nke kasị n'ọnụ ọgụgụ bụ ìgwè 18.02.2006 Ike udo. Dị 365 000 $ 000 nde , e kewara ekewa ya n'etiti 8 Player .
-> Play ke Internet Next jackpot: $230,000,000
SuperEnaLotto lotiri bụ egwuregwu ewu ke Europe, na site na Italy. Ke SuperEnaLotto Enwee Mmeri bụ ibu , otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa. Nke a bụ nakwa n'ihi na Player nwere ike ịrụ SuperEnaLotto ịntanetị . Akpa Olee ama ada itie SuperEnalotto 3 XII 1997 afọ. Na Olee kechioma nọmba ndị 3 ugboro n'izu na 20:20 na mpaghara oge - bụla Tuesday, Thursday na Saturday . Enwee Mmeri SuperEnaLotto bụ gigantic . Nke kasị n'ọnụ ọgụgụ n'ime ndị a bụ 147,807,299.08 euro. Nke a buru ibu e merie on Aug. 22, 2009 afọ. Dị ka ọtụtụ ndị dị ka 1.300.000 euro isi jackpot mbụ ogo ! A ole na ole bụ chịkọbara winnings . Ugbu a , e nwere mba mmachibido dị ka ego nke cumulative SuperEnaLotto . Mgbe Olee SuperEnalotto bụ 6 nke 90 nọmba . Ka iti isii ị kụrụ 6 nọmba nke 90 random nọmba . Ọ dị ezigbo eleghi anya na iti 6 nọmba , ebe ọ bụ na ọ bụ 1 622614630 . Na ihe gbasara nke puru omume nke ọkụkụ 5 nọmba bụ 1 1.235.346 , 4 nọmba 1 11.907 , ka ihe gbasara nke puru omume nke ọkụkụ atọ nọmba SuperEnaLotto bụ 1 327 Na ihe gbasara nke puru omume nke na-emeri isii SuperEnaLotto dị obere , ma, ekele dị nnọọ ukwuu jackpots . Ileghara ke kechioma nọmba nwere ike zụrụ kpọmkwem site na internet . Iji mee nke a, denyere aha gị na akaụntụ na website , nke emekọ na ịkụ nzọ SuperEnaLotto . N'otu oge, aha , ị nwere ike họrọ 6 nọmba nke 90 Ị nwere ike ịhọrọ otú ha pụrụ isi kwuo ya na-adọta iche ma họrọ ụbọchị na-adọta ahọrọ nọmba . N'ihi na osisi ke SuperEnaLotto ẹdude ke Intanet , i nwere ike ịkwụ ụgwọ kpọmkwem site na kaadị na internet .
-> Play ke Internet Next jackpot: €74,300,000
Mega Ọtụtụ nde mmadụ bụ lotiri American ama ntọala ke 2008 , emi opekempe chọr'inwe nke na-emeri bụ ka US $ 12 nde ( $ 12 nde ) .. Ọchịchị nke Mega Ọtụtụ nde mmadụ egwuregwu bụ iti ise nọmba 1 75 na iti onye ọzọ nọmba site na 1 15 Ọnụ Ọgụgụ 1 75 ndị na-acha ọcha bọọlụ , nọmba 1 15 bụ ọlaedo bọọlụ. Otu mmasị nọmba site na 1 75 akpọ Mega udo. Ọkụkụ ndị niile na ọnụ ọgụgụ -enweta nkwanye jackpot ke Mega Ọtụtụ nde mmadụ , ma na nke a bụ na ọ dịghị ihe ọzọ $ 12 nde . Home merie ke Mega Ọtụtụ nde mmadụ ( jackpot ) na- akwụ ụgwọ n'ihi na afọ 26 , kwa afọ otu nkeji nkeji . Mega Ọtụtụ nde mmadụ lotiri mubanye ọ bụla Tuesday ọ bụla Friday ke WSB -TV ke 23:00 Eastern ini ke USA . Drawings itie ke Atlanta . Ndi ekenịmde ke Glenn Burns . Nnukwu chọr'inwe ke Mega Ọtụtụ nde mmadụ dara 16.10.2009 . Ọ bụ $ 200 nde ( $ 200 nde ( odika 137 nde Euro ). Ohere nke na-emeri ihe Jackpot (5 +1 ) bụ 1 n'ime 175.711.536 . Ohere ọkụkụ 5 nọmba ( ọcha bọọlụ ) bụ 1 3.904.701 . Na-emeri bụ mgbe ahụ $ 250.000 . Ohere nke ọkụkụ 4 ọcha bọọlụ na ọlaedo (4 +1 ) bụ 1 d0 689,065 , ọkụkụ anọ na-acha ọcha bọọlụ na ọlaedo (4 +1 ) merie $ 10,000. $ 150 iji merie onye kụrụ anọ na-acha ọcha bọọlụ (4 +0 ) ma ọ bụ 3 ọcha bọọlụ na otu gold (3 +1 ). Ohere inweta ọkụkụ 4 ọcha bọọlụ bụ 1 n'ime 15.313 , mgbe ọkụkụ 3 +1 bụ 1 13.781 . Ọkụkụ na atọ na-acha ọcha bọọlụ (3 +0 ) merie $ 7, na ohere nke na ọ bụ 1 36 1 844 - mere bụ ohere kụrụ abụọ bọọlụ ọcha na ọlaedo obi ụtọ , mgbe ahụ ga-enweta nkwanye $ 10 Ọ bụrụ na anyị kụrụ onye na-acha ọcha na ọlaedo obi ụtọ , mgbe ahụ, ị na -emeri $ 3, na Ohere inweta ọkụkụ ndị dị otú ahụ a Nchikota bụ ruo 141 Kasị nta chọr'inwe ke Mega Ọtụtụ nde mmadụ bụ $ 2, i nwere ike imeri ya ọkụkụ ọlaedo obi ụtọ , na ihe gbasara nke puru omume nke ọkụkụ na ọlaedo nọ bụ 1 75
-> Play ke Internet Next jackpot: $245,000,000
Euro Ọtụtụ nde mmadụ lotiri bụ ndị kasị ewu ewu na Europe. Obodo ebe i nwere ike ịrụ nke Euro Ọtụtụ nde mmadụ bụ: Austria , Belgium, Spain , France, Ireland, Luxembourg , Portugal, Switzerland na United Alaeze Chineke. Euro Ọtụtụ nde mmadụ hazie ke Spain ke lotiri lotiri s Aquestas des estada , ke UK site Camelot , ndien ke France ke lotiri Francaise des Jeux . Site na atumatu olu a -abawanye na ọnụ ọgụgụ nke ndị mba European Union , ọ ga-ekwe omume dịkwuo ná mba ndị nke i nwere ike ịrụ nke Euro Ọtụtụ nde mmadụ . Akpa Euro Ọtụtụ nde mmadụ lotiri egwuregwu ẹkenịmde ke 13.02.2004 ke Paris. Na-eru nọmba ke mbre Euro Ọtụtụ nde mmadụ na- ẹkenịmde ke Fridays ke 21:25 ke Paris. Egwuregwu isịne ke akpanikọ ke 5 nọmba na- adọrọ mmasị na 50 nọmba . Ke adianade do , e nwere mmadụ abụọ na nọmba mmasị site na 1 9 Stresa bụ igwe ka e dere 50 bọọlụ , ka igwe na 9 bọọlụ bụ Paquerette . Iji nweta ìgwè ga iti ndị niile na nọmba . Ná mmalite, nke ìgwè dị ruo nde mmadụ 15 . Euro . Kachasi chọr'inwe ke Euro Ọtụtụ nde mmadụ bụ ruo 126 000 000 nde . Na ihe ọkpụkpọ ka ndibọhọ a nnukwu ibat ke May 2009 ke Spain. Na ihe gbasara nke puru omume nke na-emeri ihe isi chọr'inwe ke Euro Ọtụtụ nde mmadụ bụ Olee otú egwu Euro Ọtụtụ nde mmadụ ? Na Euro Ọtụtụ nde mmadụ nwere ike rụrụ nnọọ mfe n'ụzọ site na Ịntanetị. Dị denyere aha gị na akaụntụ ahụ kwekọrọ ekwekọ website , nke na-enye anyị ike iji zipu nzo ke Euro Ọtụtụ nde mmadụ , njikwa Enwee Mmeri. Na ihe gbasara nke puru omume nke na-emeri ihe ọ bụla ego ke Euro Ọtụtụ nde mmadụ bụ 1:24 , n'ihi ya, ọ bụ nnọọ ibu. Na ihe gbasara nke puru omume nke na-emeri ihe isi chọr'inwe ke Euro Ọtụtụ nde mmadụ bụ 1:76000000000 (1 ke 76 nde ). Niile na-emeri Euro Ọtụtụ nde mmadụ bụ ụtụ isi .
-> Play ke Internet Next jackpot: €76,000,000